DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee maanta oo Khamiis ah 05 Sebtembar 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS »DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Khamiista 05 Sebtember 2019 - Afrika
- Tani waxaa markii ugu horreysay suurtagal laga dhigay mahadcelintii kulanka bishii Marso 2019 ee Washington dhex maray Madaxweyne Felix Tshisekedi iyo Madaxweynaha IMF Christine Lagarde. Ka dib hawlgalkeedii DRC, koox IMF ah ayaa sii daayay warbixintii 5 June oo ku baaqaya isbadal siyaasad dhaqaale iyo mid maaliyadeed, sida lagu sheegay warbaahinta saaka.
Hay'ada PRESS CONGOLESE AGENCY waxay soo warinaysaa in IMF ay soo jeedisay talaabooyin lagu yareynayo daqliga ka soo baxa qasnadda shacabka ee DRC. Guddiga agaasimayaasha IMF, ka dib kulan ay Talaadadii ku yeesheen xaruntooda, waxay u soo jeediyeen xukuumadda Kongo qarashaad ku saabsan kor u qaadista dakhliga ka yimaada qasnada dadweynaha, ayay tiri ACP oo soo xiganeysa bayaan ka soo baxay IMF. hay'addu waxay timid Arbacadii 4 Sebtember 2019 qoraalkeeda.
Joornaalka maalinlaha ah ee ACP, talaabooyinkan waxaa ka mid ah dhimista ka-reebitaanka iyo ballaarinta saldhiga canshuuraha, fududeynta nidaamka canshuuraha iyo hagaajinta maamulka canshuuraha iyo sidoo kale xakamaynta xuduudaha, is-dhexgal dheeraad ah Daqliga soo gala macdanta lacag ahaan.
Marka la eego joogtaynta deynta, ayay qortay Wakaaladda Dadweynaha, maamulayaasha IMF waxay ku baaqeen in la xakameeyo mashaariicda maalgashiga ee dadweynaha, lagana fogaado amaahda qaaliga ah iyo deynta la hubo iyo horumarinta istaraatiijiyad lagu duubo deynta. deynta guriga.
RADIO FRANCE INTERNATIONAL waxay ku dhawaaqeysaa arintan talooyinka IMF ee dib u soo kabashada dhaqaalaha ee DRC. Sida laga soo xigtay RFI, Hay'adda Lacagta Adduunka waxay weydiisaneysaa DRC inay ka faa'iideysato marxaladan kala guurka ah ee siyaasadeed si loo hirgaliyo isbadal la taaban karo si loo nadiifiyo dhaqaalaha guud, loola dagaallamo saboolnimada baahsan iyo musuqmaasuqa, loona dardargeliyo koboc loo dhan yahay. Tani waa mid ka mid ah gunaanadyada dib-u-eegista sannadlaha ah ee ugu horreysa ee DRC tan iyo 2015.
Saxaafadda Rue Camille Desmoulins waxay xasuusineysaa in madaxa cusub ee gobolka Felix Tshisekedi uu kusoo laabtay IMF uuna u ogolaaday inuu dib ugu laabto howlihiisii ​​dalka. Khudbaddiisii ​​caleemo saarka, Ra'iisul Wasaaraha wuxuu cadeeyay inuu ku tiirsan yahay la-hawlgalayaasha dibedda, oo ay ku jiraan IMF.
RFI-ga ayaa raaciyay dib-u-eegisteedii sannadlaha ahayd, IMF waxay horey u qortay "in DRC ay u baahan tahay taageerada deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah" si ay u xoojiso awoodeeda. Laakiin intaas oo dhan, ururka caalamiga ahi wuxuu dalka ku dhiirigelinayaa inay qaadaan dibuhabayn asaasi ah.
DESCECO.COM ayaa soo warinaysa in IMF ay ku talineyso in Bangiga Dhexe kordhiyo kaydka sarifka lacagaha qalaad si loo xasiliyo suuqa. Saraakiisha IMF ayaa sheegaya in kororka kaydka lacagaha qalaad uu u oggolaanayo Baanka Dhexe ee Kongo (BCC) inuu xasiliyo suuqa, ayay tiri warbaahinta dalxiiska ah.
Sida laga soo xigtay DESCECO.COM, “Agaasimayaasha waxay isku raaceen in dib u habeynta qaab dhismeedka siyaasada lacageed ay sare u qaadi doonto waxtarka. Waxay ku booriyeen bangiga dhexe inuu kordhiyo kaydka sarifka lacagaha qalaad si uu u faragaliyo si suuqa loo xasiliyo, sida ay ahayd.
PROSPERITY wuxuu sheegay in Huawei ay ballanqaadeyso inay taageerto dowladda Congo. Madaxa Gobolka, Felix Tshisekedi Tshilombo, salaasada Talaadada, 3 Sebtember ee Kinshasa, laambadaha barnaamijka Aqoonsiga Aqoonsiga Dijital ah-Horizon 2025.
Marka loo eego maalinlaha Mont-Fleury, hawshan oo xiritaankeeda loo qorsheeyay Khamiista, Sebtembar 5 waxay soo uruurisay khubaro ka socota waaxda dijitaalka, madaxda adeegyada dadweynaha, wakiillada shirkadaha isgaarsiinta iyo dhowr kaqeybgalayaal kale oo ku xeel dheer tareenka iyo qaabab loogu suurtogaliyo dalka inuu yeesho qorshe digital ah oo ku filan.
Siyaasadda, MADAXWEYNE DES AS cinwaano: dib u heshiisiin qaran, calaamadaha Ilunga. Wargeyska maalinlaha ah ee Limete, isaga oo ballan qaadaya in dib loogu soo celiyo maydadka Mobutu iyo Tshombe, iyo in la siiyo maamuus dhan kuwii ka horreeyay, Raiisel Wasaaraha cusub wuxuu qayb ka yahay caqli galinta heshiisyada qaran ee uu ku dooday Madaxweynaha Jamhuuriyadda. .
Beddelka wadashaqeynta "cadowga" ee shalay, oo ah UDPS iyo xerada Kabila, ee ku saleysan caqli gal isbaheysi ayaa ka imaaneysa walaaca laga qabo is-afgaranwaaga u dhexeeya wiilasha dalkan, sidaas darteedna dib-u-heshiisiin qaran. Kaliya waan u hambalyeyn karnaa nafteena, sida FORUM DES AS.
MADAXWEYNAHA MADAXWEYNE oo cinwaan weyn ka leh badalista Ilunga oo filayay Jimcaha. Maalin kasta, dadka reer Kongareeska ah waxaa laga yaabaa inay oomman yihiin inay arkaan tirooyinka cusub ee dawladda oo runtii ay shaqadooda bilaabaan laakiin, waxaa jira talaabooyin aan si cad loo gubi doonin.
Sidaa darteed waa lagama maarmaan in si farsamo leh loo raaco loona raaco dhammaan habraacyada warqadda. Raiiselwasaaraha Sylvestre Ilunga ayaa ku soo laaban doona Jimcaha, Sebtember 6 Sebtember Golaha Qaranka, ka dib markii uu shaaca ka qaaday barnaamijka Talaadadii hore barnaamijka dawladda.
48 saacadood ayaa la siiyay isaga si uu u diyaariyo jawaabo ku qanacsan jawaabaha lama tirin karin iyo welwelka kala duwan ee ay soo jeediyeen wakiillada dadka la soo doortay ee la xiriira arrintan. Marka barnaamijka la oggolaado, waxaa si rasmi ah loo maalgashan doonaa kooxda dawladda oo dhan, shaqaduna way bilaabmaysaa, ayuu yidhi MADAXWEYNE.
CONGOSYNTHESE.COM oo wax ku qora cinwaanka Kongo-Central ee ah in wasiirka gobolka ee arrimaha gudaha uu xaqiijinayo ku-meel-gaarka guddoomiyaha ayaa loogu yeeray Kinshasa. Ku-xigeenka Ku-meel-gaarka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Basile Olongo ayaa u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee Kongo-Bartamaha, Marcel Matumpa, in uu noqdo guddoomiyaha ku-meel-gaarka ah ee Atou Matubuana.
Kan dambe iyo kuxigeenka, Justin Luemba, oo ku lug lahaa fadeexad galmo oo dhowaan ka qarxay Kongo Central waxay joogi doonaan Kinshasa martiqaadka Basile Olongo.
Cabiraada wicitaanadan ayaa loo qaaday si loogu ogolaado xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee u dhaw maxkamada Cassation inuu ku sameeyo baaritaankiisa, iyadoon wax saameyn ah ku laheyn xaqiiqada fadeexada galmada ee labada masar ee Kongo Central ay ahaadaan. 4 Sebtember Mr. Olongo.